လော ရှည် - က တဲ့ ပွဲ: သေခြင်း
Posted by Law Shay at 4:21 AM
ဟားဟား... ကျနော့်ထက် အများကြီး ပိုခမ်းနားတယ်ဗျို့...
haha..When I started out reading the first few paragraphs, the scenes in Final Destination Movie suddenly came to my mind.
I was reading your post thinking that it might end asasad story. Nice post!
"all meeting end with parting ." ဆိုတာလေးကို သတိရသွားမိတယ် ။အချိန်တန်ရင် အရာအားလုံးကို စွန့် လွတ် ခွဲခွာရမှာပါပဲ။ ကိုလောရှည် က တော်တော်အရေးအသားကောင်းတာပဲ။
အွန် ဖတ်လို့တော်တော် ကောင်းပါတယ်..။ဖတ်သမျှ လူကို ပြန်တက်ခ် ပါတယ် ဆိုတာ တစ်ခုပဲ ပြောစရာ ရှိတာ ..ဟီး။